လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်အဆင်ပြေသော ရတနာလမ်းမကြီးပေါ် နေရာကောင်း #မြေကွက်...
21,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10022352
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သံသုမာလမ်းမကျောကပ် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် သင့်လျော်သည့်...
Ad Number S-10021992
စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်အထူးသင့်လျော်သော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မြေကွက်အရောင်း။
Ad Number S-10021544
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ မာဃလမ်းသန့် ရှိမြေကွက်...
Ad Number S-10020697
Ad Number S-10020221
တောင်ဥက္ကလာ ၆ ရက်ကွက် မြေကွက်ကျယ်ရောင်း
Ad Number S-10019747
ရွှေလင်းအိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း Close
တောင်ဥက္ကလာ ဟံသာဝတီ ၂၂လမ်းတွင် လုံးချင်းမြေကွက်ရောင်းမည်။
Ad Number S-10017996
🟣 တောင်ဥက္ကလာပလမ်းကျယ် စျေးတန် နေရာကောင်းအရောင်းများ 🟣
Ad Number S-10017644
My Property Real Estate Close
တောင်ဥက္ကလာပ မှာ ဂရမ်အမည်ပေါက် မြေကွက်ရောင်းမည်။
Ad Number S-10016763
တောင်ဥက္ကလာ 12ရပ်ကွက်မှာ ဂရမ်မြေ ရောင်းမည်။
Ad Number S-10013522